7 Amazing Ebe Will Ga-ahụ naanị na New Zealand | Akụkọ Njem
7 ịtụnanya ebe ị ga-ahụ naanị na New Zealand
Susana Garcia | | General, New Zealand, Oceania
New Zealand, otu n'ime ebe nwere ọdịdị kachasị ịtụnanya ma chekwaa na mbara ala, ọ bụ ebe zuru oke iji kwado ezigbo ọrụ ebube nke okike. Rịba na ịtụnanya ebe anyị ga-ahụ naanị na ala a nke ọdịiche. Site n'ụsọ osimiri nwere okwute gbaa gburugburu na mmiri glacier ma ọ bụ ọdọ mmiri nkịtị. Ihe niile nwere otu ebe n'ime ala juputara na anwansi dika nke a.
Ọ bụghị ihe ndabara na Peter Jackson họọrọ New Zealand iji megharịa Middle Earth, na ọtụtụ ala ya na oghere pụrụ iche pụrụ iche n'ụwa. You ga-amata n'etiti mbara ala ndị Mordor, ma ọ bụ ebe oyi kpọnwụrụ akpọnwụ nke ihe nkiri ahụ, na enwere ọtụtụ ihe ị ga-ahụ na ala dị egwu. Maka ugbu a, lelee ebe asatọ a dị ịtụnanya ị ga-aga.
1 Okwute mmiri
2 Katidral Cove, ọnụ ụzọ ámá Narnia
3 Tongariro ma ọ bụ Mordor National Park
4 Elephant Rocks ma ọ bụ enyí nkume
6 Champagne ọdọ mmiri
7 Milford Sound, fjords na New Zealand
A na-ahụ okwute ndị a na Koekohe Beach, a na-akpọkarị ya Okwute moeraki. Ọ dị kilomita 40 n’ebe ndịda Oamaru, ma nwee okwute ndị nwere okirikiri, ndị dị ka ha si na mbara ụwa ọzọ, n’agbanyeghi na ha nwekwara ike ịdị ka akwa anụ ọhịa. Dịka ọdịnala agwaetiti ahụ si kwuo, ha bụ okwute ndị dị nsọ, mana sayensị na-agwa anyị na e hibere ha ọtụtụ nde gara aga, ebe ha bụ ụyọkọ nke calcium nke ihe na-agbakọta gburugburu etiti. Ha bụ nnukwu njem nleta na mpaghara ahụ.
Katidral Cove, ọnụ ụzọ ámá Narnia
Osimiri a dị ịtụnanya dị na Coromandel Peninsula, 32 kilomita site na Whitianga. Ọ bụ ama ama ọ bụghị naanị maka ịbụ otu n'ime osimiri kachasị mma na New Zealand, kamakwa n'ihi na nke a bụ ọnụ ụzọ Narnia na fim ahụ. Ihe E Mere nke Narnia: Prince Caspian. Ọbụghị naanị na ị nwere ike isi n'otu akụkụ osimiri gafere n'akụkụ nke ọzọ site n'ọgba a mara mma, mana oke osimiri ahụ dị mma dịkwa mma maka ịsa ahụ, ọbụnakwa enwere nsụda mmiri nke dabara na aja. O doro anya na ọ dị ka ọnụ ụzọ nke ụwa anwansi.
Tongariro ma ọ bụ Mordor National Park
Ogige Ntụrụndụ Tongariro gbara ugwu ugwu Tongariro, Ngauruhoe na Ruapehu gburugburu. Ọrụ kachasị ewu ewu bụ 'Tongariro Alpina Crossing', njem mmụta nke na-ewe naanị otu ụbọchị, na nke gafere ugwu ugwu atọ ahụ. Ọnọdụ ala a nwere ike ịma nke ọma, ọ bụkwa na ọkụ ọkụ a họọrọ ka Ruapehu na-anọchite Mordor na Dinwenu nke Mgbaaka, ọ bụ ya mere ọtụtụ ndị na-akwado egwuregwu a ji chọọ ịhụ ugwu a. N'ime ogige a ị nwere ike ịme ụzọ gasị na njem mmụta na ọbụlagodi ịgba ọsọ, ọ bụkwa ebe nwere oke mmụọ dị mmụọ maka ndị Maori.
Elephant Rocks ma ọ bụ enyí nkume
Ebe a nwere ike ọ gaghị ama dị ka Tongariro, mana eziokwu bụ na ọ dịkwa iche, na oghere nke na-adọrọ mmasị ileta, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ị ga-eche n'echiche na nnukwu usoro okwute ndị a bụ n'ezie enyí ụjọ, ya mere eji aha ebe ahu. Ha di na mpaghara North Otago, ma buru kwa ebe ebe ufodu ihe nlere site na ihe nkiri Narnia.
Na New Zealand anyị nwere ike ịga site na ịga n’akụkụ osimiri ma ọ bụ ugwu mgbawa na gaa na glacier, dị ka ama Franz Josef glacier. Igwe mmiri a dị na Westland National Park, na South Island na kilomita ole na ole site n'oké osimiri. Enwere ike ịnweta ụzọ glasia a n'ụzọ abụọ, n'ụkwụ ma ọ bụ site na helikọpta. N'ezie, ahụmịhe abụọ nwere ihe na-atọ ụtọ, nke ahụ bụ na ụkwụ ị nwere ike ịhụ nkọwa niile mana ọ chọrọ mgbalị doro anya, yana helikọpta ị ga-ahụ ebe ndị dịpụrụ adịpụ.
Champagne ọdọ mmiri
Carbon dioxide na-eme ka mmiri ndị a na-asọpụta mgbe niile, ya mere aha ya bụ Champagne Pool. Ndị a bụ Wai-O-Tapu ọdọ mmiri, n'ebe ugwu nke mba ahụ. Ọbụghị naanị na ọ bụ spa na-emeghe ikuku, mana ọdọ mmiri ndị a bụkwa ezigbo ọhụụ iji hụ, yana agba akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na oroma ha, egosipụta na uzuoku. Osimiri a dị na nnukwu okpomọkụ n'ihi ya ọ gaghị ekwe omume ịsa ahụ na ha. Agbanyeghị, enwere ebe ndị ọbịa na-agagharị ma na-amụtakwu banyere mpaghara a.
Milford Sound, fjords na New Zealand
Ọ bụ ezie na anyị anọghị na Norway, New Zealand na-enyekwa anyị ya ahụmahụ fjord, nke n'oge ọ bụla n'afọ nwere ike iju. Ugwu ya nke snowy, ahihia ndu, ugwu di iche-iche na igighari site na fjords ahu, na enwe onu okike. Enwere ọtụtụ ọrụ na Milford Sound, otu n'ime ihe ndị kachasị ewu ewu bụ njem ụgbọ mmiri, ehihie ma ọ bụ abalị, iji hụ fjords site n'echiche niile. Nwekwara ike kayak, iji hụ ihe niile n'ụzọ ndị ọzọ, lee ya anya site na nnụnụ na helikọpta na ọbụlagodi ịga mmiri mmiri na mpaghara ahụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » General » 7 ịtụnanya ebe ị ga-ahụ naanị na New Zealand
Ndụmọdụ maka njem na Thailand: ihe ị ga-eme na ihe ị na-agaghị eme
Nleta Odaiba, nke kachasị ọhụrụ na Tokyo